Degmada Shaykoosh Oo Ku Guulaysatay Koobkii Tartanka Kubada Cagta Ee Gobolka Qoraxey - Cakaara News
Degmada Shaykoosh Oo Ku Guulaysatay Koobkii Tartanka Kubada Cagta Ee Gobolka Qoraxey
Qabridahar(cakaaranews)Sabti 8da July 2017. Waxaa xarunta gobolka qoraxey ee Magaalada Qabridahar lagu soo gabagabeeyay Tartankii kubada cagta ee usocday dhamaan degmooyinka uu kakoobanyahay Gobolka qoraxey. Kaasoo maalmihii u danbeeyay kascoday.
Hadaba tartankan kubada cagta ee degmooyinka gobolka qoraxey ayaa waxaa ku guulaystay degmada shaykoosh dhibco dhan 7 dhibcood iyo 8 gool islamarkaana koobkii kubada cagta ee gobolka kuqaaday, halka kaalinta 2aad ay gashay degmada marsin kaalinta 3aadna ay gashay degmada shilaabo.
dhankakale, Gudoomiyaha Gobolka Qoraxey mudane Yuusuf Aadan Yuusuf oo kawarbixiyay taratankan ayaa sheegay in tartankan kubada cagta ay ku tartamayeen degmooyinka gobolka qoraxay. Wuxuuna xusay in ciyaaruhu si nabadgalya ah oo ciyaar wanaag leh ku soo dhamaadeen maanta guushuna ay kuraacday degmada shaykoosh.
iskusoo wada duuboo, taratankan ayaa ahaa mid gobolku uu kusoo xushay ciyaartawgii uga qaybgali lahaa tartanka heer deegaan ee ay kutartamidoonaan gobolada deegaanka soomaalida itoobiya ee kadhici doona xarunta deegaanka e magalada jigjiga.